अनुभूति: बयरको हाँगामा अल्झिएका ती दिन
मंसिर २५, २०७८
साथी समूहमा हिँड्दै, चल्दै, गफ गर्दै खाँदा बेग्लै खुसी लाग्थ्यो । त्यो खुसी न किनेर पाइन्थ्यो न मागेर । त्यो खुसी हामीले स्वयम् बनाएका थियौं। बालापनको त्यो बदमासीमा हृदय पुलकित पार्ने रस्वादन थियो । त्यो क्षणलाई रोक्न न मनले मान्थ्यो न चेतनाले ।
बयर बुढोको बयरको बोटमा झटारो हाँनिरहेकी थिएँ । मसँग गाउँका थुप्रै केटाकेटी थिए । कसैले झटारोले त कसैले खेतमा भएको ढेका (माटोको डल्लो) टिप्दै हान्दै थिए । गोरे झटारो हान्नुभन्दा अगाडि बल लगाउँदै एक हात पछाडि र हानिसकेपछि एक हात अगाडि हुतिन्थ्यो ।
बयरको बोटतिर हेरेँ । साथीहरू कोही झटारो त कोही ढेला हान्न व्यस्त थिए । म पनि हातमा खचरलतीको (बेसरमीको झार) झटारो बोकेकी थिएँ । हाँगाहरुमा लटरम्मै बयर फलेको थियो । मेरो आँखा पाकेको बयरमा प¥यो । बयर जसरी पनि झारेर खानु थियो ।
म हाँगामा फलेको बयरतिर हेरेँ । आँखाले निशाना लगाएँ । निशाना लगाएर म पनि गोरेझैँ एक हात पछाडि सर्दै बेस्सरी बल लगाएर झटारो हानेँ । झटारो बयरमा नलागेर हाँगामा लाग्यो । बयरको सट्टा बयरका पातहरु झरे। झटारो छेउमै झ¥यो । दौडिँदै फेरि झटारो टिपेँ । टिपेर फेरि आँखाले निशाना बनाउँदै हानेँ । यो पल्ट नि बयर नझरेर झटारो हाँगामा अल्झियो । फेरि पात मात्र झ¥यो ।
साथी सवितातिर हेरेँ उसले एक झटारोमा दुईओटा बयर झारी । तुरुन्तै गएर बयर टिपी । उसको अनुहारतिर हेरेँ । नाकबाट लत्रेर सिंगान उसको ओठलाई छोइरहेको थियो ।
उसले तलको ओठले माथिल्लो बङ्गारा च्यापी । नाकको दुबै प्वालमा लत्रिरहेको हल्का पहेलो रङको सिंगान तल्लो ओठले सर्लप्प मुखमा निली । सिंगान निली तर सिंगानको खात यत्तिकै थियो ।
उसले लगत्तै टिपेको बयर मुखमा हालेर करमकरम चपाउन थाली । अर्को बयर मतिर दिँदै भनी, ‘ले बैर खो । उसले सिंगान निलेको देखेर मलाई घिन लागिसकेको थियो । मैले उसको कुरा टार्दै भनेँ, हम नै खेबौ’ ।
मैले नलिएको देखेर दिनेशले भन्यो, ‘हमरा दे, हम खेबै ’ । उसले बयर दिनेशलाई दिई । दिनेशले पुरै बयर क्वाप्प मुखमा हालेर करमकरम चपायो । दिनेशले चपाएको देखेर मैले थुक घुटुक्क निलेँ तर सविताले सिंगान निलेको दृश्य सम्झेर फेरि घिन लाग्यो ।
मसँग झटारो पनि थिएन । फेरि साथीहरुतिर हेरेँ । कोही झटारो हान्दै थिए । कोही झरेको बयर टिपेर खाँदै थिएँ । कोही निशाना लगाउँदै थिएँ । कोही बयर बुढो आउँदै छन् कि भनेर उनको घरतिर हेरिरहेका थिए।
मेरो झटारो बोटमा अल्झेर अहिलेसम्म न बयर झार्न सकेकी थिए न झटारो पाउन सकेकी थिएँ । अरु साथीझैँ म पनि खेतमा भएको ढेला टिपेर फलेको बयरमा निशाना लगाउँदै ढेला हान्न थालेँ । एक पटकमा भरेन । दोस्रो पल्ट ढेला हान्दा ४, ५ ओटा बयर बोटबाट भुइँमा झरे । बयर झरेको देखेर म उत्पात खुसी भएँ । हतपत भुइँबाट बयर टिप्दै एउटा मुखमा हालेँ । अरु चारओटा खल्तीमा जतनका साथ हालेँ ।
बयर खाँदै ढेला हानिरहेकी थिएँ । ढेला हान्दा अघि अल्झेको झटारो भुँइमा भ्यात्त झर्यो । झटारो झर्दा कम्ता खुसी लागेन । ढेका खोज्ने समस्या नै भएन । ढेकाले हान्दा हान्दा खेतको ढेका सकिइसकेको थियो । झटारो अल्झेका साथीहरु छेउको खेतबाट ढेका बटुलेर ल्याउँदै बयरको हाँगामा हानिरहेका थिए ।
म झटारो पाएर झटारो हान्दै बयर झारिरहेकी थिएँ । बयरभन्दा पात धेरै झरिरहेको थियो । जति पटक झटारो हान्थेँ त्यति पटक बुढोको घरतिर हेर्थँे । मनमा बयर खाने इच्छा हुँदाहुँदै डर पनि त्यति नै थियो । बयर खाएर न पेट भथ्र्यो न आत अघाउँथ्यो तैपनि चोरेर बयर झार्दै खाँदा एक खालको सन्तुष्टि किन हुन्थ्यो ? किनकि त्यसमा स्वतन्त्रता थियो । बालापनको उमंग थियो ।
मन भित्रबाटै आह्लादित हुन्थ्यो । मस्तिष्क र हृदय प्रफुल्ल हुन्थ्यो । बाआमालाई बयर खान मन लागेको छ भनेर इच्छा व्यक्त गरेकी भएँ किनेर ल्याइदिनुहुन्थ्यो तर त्यस्तो कहिले भन्न मन लागेन । किनकी झटारो हानेर बयर खाने आनन्द किनेर खानुमा थिएन । किनकी त्यहाँ साथीको समूह हुँदैन्थ्यो । साथी समूहमा हिँड्दै, चल्दै, गफ गर्दै खाँदा बेग्लै खुसी लाग्थ्यो । त्यो खुसी न किनेर पाइन्थ्यो न मागेर । त्यो खुसी हामीले स्वयम् बनाएका थियौं। बालापनको त्यो बदमासीमा हृदय पुलकित पार्ने रस्वादन थियो । त्यो क्षणलाई रोक्न न मनले मान्थ्यो न चेतनाले ।
बयर झटारोले झार्दै आधा खल्ती टिपिसकेकी थिएँ । फेरि झटारो हान्न खोज्दा परबाट आवाज आयो, ‘रै रै धियापुतासब रै, मार, सार खरहुवान सबके, आबे दे हमरा । बापके बियाह देखाइबौ’ । यो आवाज बयर बुढोको थियो । बयर टिप्न जाँदा उनले हामीलाई कहिले पनि राम्ररी टिप्न दिँदैनथे । बयर टिपेको थाहा पाउने बित्तिकै हामीलाई लखेट्न आउँथे ।
सचेत हुँदै टिप्दा टिप्दै पनि बुढोले थाहा पाइहाल्थे । घरबाट निस्केर बारीतिर दौँडिदै हामीलाई गाली गर्दै लखेट्न बयर बुढो आइरहेका थिए । बुढोले लखेट्दा दौडिँदै भाग्न सक्दिन भनेर चप्पल कसैले लगाएका थिएनौँ । बुढोको आवाज सुनेर हामी सबैजना जहातही भाग्यौँ ।
भाग्नेवेलामा मेरो खुटामा काँडा बिझ्यो । काँडाको वास्तै नगरिकन एक हातले बयरले भरिएको खल्ती समातेँ । खल्ती समातेर सकि नसकी यसरी दौडेँ जसरी खेलाडी दौडमा विजेता बन्न दौडिन्छन्। त्यो दौडमा न हार थियो न जित थियो थियो केवल बयर बुढोको गाली र आँखाबाट ओझेल हुने त्रास ।
हामी सबैजना त्यहाँबाट भागेर मिल घरमा लुकिरहेका थियौँ । घान कुट्ने मिल थियो । त्यतिवेला मिल चलेको थिएन । मिल घरबाट चियाइरहेका थियौँ । बुढो एकछिनसम्म सबैलाई सामुहिक गाली गरे । गाली गरेर घरतिर लागे । बुढो गइसकेपछि हामी टोलभरिका केटाकेटी फेरि झटारो लिएर बयर झार्न गयौँ ।
बयरको बोटमा चढ्न सकिँदैन थियो किनकी बयरको बोटमा मसिना काँडा थिए । बयर साहुको घर पछाडिको बारीमा परालको टालबारी (टौवा बारी) थियो । त्यही टालबारीमा बयर, अम्बा, इमली र खजुरको बोट थियो । बारीको छेउमा खेतहरु थियो । ती खेतहरु हलोले जोतेका थिए । त्यही खेतको माटाको डल्ला टिपेर बयरमा हामी हान्थ्यौँ ।
फेरि हामी सबैजना व्यस्त थियौँ झटारो हान्न । यो पल्ट भने बुढो हल्ला नगरिकन आए । हामी देख्दै देखेनौँ । छेउमा भएकोे झटारो टिप्दै उनी नजिक आएर हान्ला जस्तै गरेर रिस देखाउँदै भने, ‘सार खरहुवान सब, अखैनते हम’ ।
सबै भागाभाग भयौँ तर मेरो खुट्टामा काँडा बिझ्यो । धेरै दौडिन सकिन । उनी मेरो हात समातेर झटारो उचाल्दै मलाई हान्न खोजेँ । म समातिएँ ।
मलाई हान्ने छन् भन्ने डरले आँखा चिम्लेर टाउको लुकाउँदै बुढोतिर पिठ्यु थापेँ । उनी मेरो पिठ्युसम्म झटारो ल्याए । हान्ला जस्तै गर्दै भने, ‘मारबौ, हँ, मारबौ ?’ तर हानेनन् । मेरो हात छोडे । मेरो हात छाड्ने बित्तिकै म लड्खडाउँदै जहाँत्यहीँ भागँे । बुढो भने गाली गरिरहेका थिए । मेरो जिउ थुरथुर कामिरहेको थियो ।
सबैले भन्थे बयर बुढो धेरै चन्ठ (चन्डाल) छ । केटाकेटीलाई झटारोले हान्छन् । तर अरुले भने जस्तो बयर बुढो चन्ठ थिएनन् ।
उनी जति चन्ठ भए पनि केटाकेटीप्रति प्रेम भएको मैले पाएँ । प्रेम प्रेमीप्रेमीकाबीचमा मात्र हुन्छ भनेर कसले भन्छ ? प्रेम त आत्मीयता र सौहाद्रता देखाउने मानिससँग हुन्छ र त्यसमा उमेरको कुनै रेखा हुन्न । बयर बुढोले जति गाली गरे पनि हामी केटाकेटीलाई कहिले कुटेनन् । हात समातेर झटारो हान्न खोज्दै नहान्नु केटाकेटीप्रतिको यो प्रेम नभइ के थियो त ? दया भाव, स्नेह र मायाले उनी हान्न सकेनन् ।
तेरा बाआमालाई भन्दिन्छु पनि भनेका थिए तर भनेका रहेनछन् । उनको नाम गोसाइ साहु थियो तर उनको बारीमा बयरको बोट भएकाले हामीले उनको नाम बयर बुढो राखेका थियौँ । उनी त्यसरी नै गाउँभरि बयर बुढोको नामले प्रसिद्ध भए । उनलाई सबैले बयर बुढो भनेर बोलाउन थाले । बयर बुढो भनेर बोलाउँदा उनले पनि कहिले बिरोध गरेनन् ।
अर्को दिन फेरि, झटारो हान्न व्यस्त थियौँ । नजिकको हाँगाको सबै बयर झारिसकेका थियौँ । माथिल्लो हाँगाहरुमा मात्र बयर बाँकी थियो । पाकेर पहेलो रङको भइसकेको थियो । अब जति बल लगाएर झटारो हाने पनि त्यति माथि झटारो पुग्दैन्थ्यो । बयरको बोट अग्लो थियो । मसिना काँडाहरु पनि थियो । तैपनि काँडासँग सचेत हुँदै हामी चारजना फटाफट बयरको बोटमा चढ्यौँ ।
फटाफट टिप्दै तल फालिरहेका थियौँ । तल बस्ने साथीहरुले हामीले फालेको बयर टिपिरहेका थिए । गोरे गस्ती बसिरहेको थियो । ऊ बयर बुढोको घरतिर हेरिरहेको थियो । हामी टिपिरहेको थाहा जाएर बयर बुढो फेरि गाली गर्दै आए, ‘आबे दे । सार खरहुवान’ । हामीलाई लखेट्न आउँदै गरेको गस्ती बसेका गोरेले देखेछ । ऊ भाग्दै भन्यो, ‘बैर बुरहुवा आबै छौ । भाग्, भाग् ।’
उसको कुरा सुनेर तल टिप्दै गरेका साथीहरु टिप्न छोडेर भागे । हामी चारजना भने टिप्दा टिप्दा हाँगामा गइसकेका थियौँ । साहु आएको थाहा पाएर हामी पनि हतारिँदै रुखबाट तल ओर्लिन थाल्यौँ । म समेत तीन जना ओर्लेर भाग्यौँ । चौथो दीपेन भने ओर्लिनेवेलामा माथिबाटै हाम फालेछ । रुखबाट एकै पटक भुँइमा लड्यो । ऊ लडेको भ्यात्त आवाज आयो । हामी दीपेनलाई छोडेर आफ्नो ज्यान बचाउन जहातहीँ भाग्यौँ । भुँइमा लडिरहेको दीपेनलाई बयर बुुढोले झटारो टिपेर हान्न खोज्दै रिसाइरहेका थिए, ‘मारबौ । यह्या सटकासे मारबौ । केहेन लागलौ ? भने खसलिही । बापके बियाह देखलिही ने । और येबहि बैर तोरैले ?’
भुँइबाट उठन नसकेका दीपेन भाग्न नसके पनि जबरजस्ती हात समात्दै रुँलाजस्तै गर्दै त्यहाँबाट भाग्यो । बयर बुढोले उसलाई कुटेन गाली मात्र गरे । दुई दिनपछि थाहा भयो रुखबाट लडेर दीपेनको बाया हातै मर्केको थियो । ऊ भोलिबाट प्लास्टर बाँधेको हात लिएर बयर टिप्न आउन थाल्यो । हात मर्के पनि बयर टिप्न आउन छोडेन । बयर बुढोको गाली खानबाट हामी बञ्चित हुन सकेनौँ ।
बयर चोरेर टिप्दा डर लाग्थ्यो । बयर खान पाउँदा बयर बुढोको गाली पनि अमृतपान गरेजस्तो अनुभव हुन्थ्यो । त्रास थियो । गाली खाइन्थ्यो । कुटाइको डर थियो । समातिए भने भक्कु कुटाइ खाइन्छ भन्ने अनुमान लगाइन्थ्यो तैपनि टिप्न छोडिदैन्थ्यो ।
यही स्वतन्त्रताले जीवन रोमाञ्चक छ भन्ने अनुभव गराएको थियो । जीवन जिउन छोड्नु हुन्न भन्ने भाव सँगाल्न सिकाएको थियो । जीवन कर्तव्यले थिचिएर जिम्मेवारीको चेपुवामा परेपछि यस्तो स्वतन्त्रता घट्दै जाने छ भन्ने अनुमान कहिले लगाइनँ । र फेरि पनि गाली खाँदै झटारो हानेर बयर टिप्ने स्वतन्त्रताको आसामा जीवन बाँच्दै गएँ । बाँच्दै गएँ । तर, थाहै नदिइकन उमेरसँगै आँखा अगाडिबाट त्यो स्वतन्त्रता टाढा भाग्दै गयो ।
खोप लगाउने बढे, लक्षितको ८० प्रतिशतले खोप पाए
यसरी मनाइयो पृथ्वी जन्मजयन्ती (फोटो फिचर)
महामारी फैलिएको छ तर लकडाउन गर्नु हुँदैन : अर्थमन्त्री
४५ वर्ष अघिका बिपीको सम्झना : राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस
जाने होइन साँगा ? घुमघाम र तीर्थब्रतको संगम स्थल
माओवादी महाधिवेशनमा जनयुद्धको झल्को (फोटो फिचर)
नेकपा–एसमा जनवादी मिसिँदाको रौनक (फोटो फिचर)
प्रचण्ड माथि देउवाले लगाएका प्रशंसाका तीन गुन,‘बहादुर नेता’‘राजनेता’र‘संविधानसभाका अभियानकर्ता’
पार्टीबिहिन बनेका ओलीले सेटिङबाट पार्टी र सूर्य चिन्ह पाए : प्रचण्ड
रुपान्तरणको एजेण्डालाई लिएर जनतामा जान्छौं : नेता कोइराला
सुपा देउराली मन्दिरको भेटीबाट विद्यालय सञ्चालन
सत्तारूढ दलको आज बसेको बैठकमा समयमै स्थानीय तह निर्वाचन गर्नेबारे छलफल
बालविवाह मुद्दामा पाँच जनालाई कैद
पर्यटन मन्त्री आलेको निजी सचिवालयमा कार्यरत थप दुईमा कोरोना सङ्क्रमण
आगामी वर्षका लागि लागि १४ पात्रोलाई स्वीकृति
कोभिड–१९ को सङ्क्रमण जोखिमबाट खेलकुद क्षेत्रसमेत प्रभावित
नक्कली ईन्जिन आयल (मोबिल) बनाई विक्री गरेको अभियोगमा २ जना पक्राउ
पार्टी निर्देशन पछि चौतारीले रोक्यो, महाधिवेशन लगायतका सबै कार्यक्रम
माओवादीको प्रस्तावमा प्रदेश–२ ‘मधेस प्रदेश ’ राजधानी ‘जनकपुरधाम’
प्रदेश नं २ को राजधानी जनकपुर, नाम के ?
सूचना विभाग दर्ता नंः २०२७/०७७–७८ | ईमेल ठेगानाः jayadeshnews@gmail.com
मल्टिमिडिया : रमेश बोहरा | रेप्सन प्रधान सम्वाददाता : पुजा मल्ल | सुनकुमारी थिङ | हरि ऐडि | सुदिप न्योपाने | जय राई | मदनकृष्ण देवान | बसन्त राई | दिलमाया मगर | जयदेश श्रेष्ठ